ကဗျာဆရာ ကြည်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၉)နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် အမှတ်တရ အခမ်းအနား ကျင်းပ - Yangon Media Group
အခမ်းအနားတွင် အမှတ်တရစကားများကို ကဗျာဆရာ ကြည်အောင်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကဗျာဆရာကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်)၊ ရှေ့နေကြီးဦးထွန်းအောင် ကျော်၊ စာရေးဆရာမနုနုရည် (အင်းဝ)၊ ကဗျာဆရာမောင်နွေထက်နှင့် ဆရာအောင်ထွန်းထွန်းတို့က ပြောကြားကြသည်။
ကဗျာဆရာကြည်အောင်မှာ ဆရာမောင်စွမ်းရည်နှင့်တွဲဖက်၍ စိတြကဗျာများနှင့် လမင်းတရာကဗျာများ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ဒုဋ္ဌဝတီမှ ဧရာဝတီသို့ကဗျာများ၊ မိခင်မာရသွန်၊ ဟေမန္တခြေမြန်တော်၊ သစ္စာရှာဖို့ မြင်းစီးမယ်နှင့် နှင်းဆီခင်းပေါ်က လမင်းကဗျာများကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဆရာကြည်အောင်သည် လမင်းတရာကဗျာများစာအုပ်ဖြင့် စာပေဗိမာန်စာပေဆု အစောဆုံး ရှိခဲ့သည့် ကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပင်စင်ထုတ်ပေးချိန်တွင် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် စောင့်ဆိုင်းရန်အတွက် ထိုင??
လက်ထပ်ပွဲအတွက် ဖြည်းဖြည်းချင်း စီစဉ်နေတဲ့ အော်လွန်ဒိုဘလွန်းနဲ့ ကယ်တီပယ်ရီ
မြင်းခြံမြို့တွင် သတင်းအရ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ရပ်တန့် စစ်ဆေးရာမှ မူးယစ်ဆေးပြား ငွေကျပ် သိန်??
မြန်မာ့လက်မှု အနုပညာပစ္စည်းများ ဈေးကွက်ရရှိစေရန် မကြာမီ ဖွင့်လှစ်မည့် Myanmar International Trade Center တွင် ရော?
ဝန်ကြီးများကွင်းဆင်းရာတွင် လုံခြုံမှုရှိအောင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရ